Donald Trump oo Ruushka ugu baaqay in ay jabsadaan Emailadii Hillary Clinton.. - iftineducation.com
Donald Trump oo Ruushka ugu baaqay in ay jabsadaan Emailadii Hillary Clinton..
aadan21 / July 28, 2016
iftineducation.com – Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Mareykanka, ayaa waxaa uu Sirdoonka Ruushka uu ugu baaqay in ay jabsadaan Emailada Hillary Clinton, si ay gacanta ugu dhigaan soddon kun oo farriimo ah.
Donald Trump, ayaa ku kalsoon in Ruushka uu haayo farriimo gaar ah oo Hillary Clinton ka dirtay Emailo ka baxsan midka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Waxaa uu Ruushka ugu baaqay in ay soo bandhigaan xogaha ay Email u gaar ahaa ka dirtay Hillary Clinton, si loo ogaado macluumaadka farriimahaasi oo la waayay.
Donald Trump oo Arbacadii la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay inuu jecelyahay in markasta Hillary Clinton lagu eedeeyo in ay si khalad ihi u adeegsatay awoodeedii, mudadii afarta sano ahayd ee ay ahayd Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Ninka u ololeynaaya Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga Mareykanka, ayaa wuxuu Donald Trump ku eedeeyay in uu halis gelinaayo amniga qaranka dalkaasi.
Jake Sullivan, ayaa sheegay inay tani tahay markii ugu horeysay oo Musharax metelaya xisbi wayn uu dhiiragelinaayo in dowlad shisheeye jaajuusto siyaasi kale, oo aanay isu mowqif ahayn.
dharka wasmada raga ku kacsadaan
Belgium kaadi baa laga cabbaa rumey ama ha rumeynin